Print Peppermint - Amakhadi Ebhizinisi Ezifiso Nemikhiqizo Yokuphrinta
Vumela amakhadi akho ebhizinisi abonise wonke umuntu olapha ukuzokwenza ibhizinisi elibalulekile. Ukuqedwa okukhethekile okungapheli, osayizi, nezitoko zephepha zeprimiyamu.
Thenga Custom Business Cards
Namathisela umkhiqizo wakho yonke indawo! Izitika namalebula kuyindlela ejabulisa kakhulu kodwa ebizayo ukusuka ekubeni engenabhrendi uye kokufakwa uphawu ngokuphazima kweso.
Thenga Izitikha namalebula Okwezifiso
Impilo yenzelwe ukubungazwa! Oda izimemo zangokwezifiso, izimemezelo nokunye okwengeziwe ukuze ukhumbule izikhathi zakho ezibalulekile.
Thenga Izimemo Nezincwadi
Setha ithoni yomkhiqizo wakho ngokuphrinta kwe-deboss letterpress ngokwezifiso Pantone imibala, ephrintwe ephepheni likakotini elithambile kodwa eliwugqinsi kakhulu.
Thenga i-Letterpress Printing
Amakhadi eposi angokwezifiso
Memezela izindaba zakho ezibalulekile kumakhasimende akho noma abangani ngamaphepha ahlukahlukene, osayizi, kanye nokuqedwa okukhethekile.
Thenga Amakhadi Eposi Angokwezifiso
Yenza isitatimende esinesibindi ngokunikeza ikhasimende lakho elisha ikhadi lebhizinisi lensimbi eqinile eqinile, eligxishwe nge-laser.
Thenga Metal Business Cards
Imibono emisha evela ku-Design Blog